Yintoni iNgqungquthela yesiLwimi saseFrentshi "I-Attirer"?
Uya Kukhangwa "kwisiNgesi sesiFrentshi" Umculi "
NgesiFrentshi, umculi isenzi esithetha "ukutsala." Kulungelelaniso olunomdla "kwiingubo" njengengubo yokugqoka ngenxa yokuba sihlala sigqoka ukuze sikhangele. Oko kwenza kube lula ukukhumbula, kodwa, igama elithi "iingubo" liyi- tenue .
Ukudibanisa umThengisi weLwimi lwesiFrentshi
Isenzo sokubambisana siyimfuneko ukuze sisebenzise ngokuchanekileyo "ukutsala" okanye "ukutsala" ngesiFrentshi. Kuyinkimbinkimbi ngakumbi kunesiNgesi kuba iziphelo zitshintsha kunye zombini nesigama sesigama kunye nexesha lesivakalisi.
I-Attirer iqhelekileyo-isenzi se-EN kwaye yenza ukuba isenzo sokuqhawula isenzi kube lula. Oku kungenxa yokuba unokufunda ezi fom uze usebenzise iziphumo ezifanayo zenzibe ezifanayo ezifana nomgcini (unamathisele) okanye umsebenzisi wonke (ukukhanya) .
Xa usebenzisa iseshati, qaqa isichazi sesifundo - j ', u, us , njl njl. - kunye nexesha elizayo, okanye elingapheliyo lexesha elidlulileyo lesenzi. Ngokomzekelo, " Ndiyatsala " " Ndiyayithanda " kwaye "siya kutsala" kukuthi " sisi-attirerons ".
iingubo attirerai attirais
zithatha izitifiketi attirais
iingubo attirera i-attirait
iinqwelo mabala iimbambo
irenti attirerez attiriez
umcebisi attireront attirait
Ukuthatha Inxaxheba Kwamanje Yomthengisi
Ukutshintsha umgibeli kumntu okhoyo ngoku , utshintshe umququzeleli . Oku kukunika umcebisi . Yisenzi kwaye, xa kudingeke, ingaba isichazi, igerund, okanye igama.
Iqela elidlulileyo lokuthatha iNtetho
Esikhundleni sokusebenzisa ukungafezekanga kwexesha elidlulileyo, unako ukukhetha i- passé compé eqhelekileyo ukubonisa "ukukhanga." Ukwenza oku, kuya kufuneka udibanise isenzi esincedisayo , sebenzisa iqela elidlulileyo le- attiré.
Njengomzekelo, ukuba "sitsalane" ngesiFrentshi, uya kusebenzisa " si-attiré. " Ngokufanayo, "ndatsala" " i-attiré ." I- ai kunye nee- ai zi-conjugates zexesha ezidlulileyo ze- poss eziguqulwa yinto.
Ukugqithiswa okungakumbi koMthengisi
Xa ufunda isiFrentshi nje, unokugxila kwixesha elizayo, elizayo, kunye ne-passé compé ye- attirer .
Ezi fom zokugqibela azizona zibalulekileyo, kodwa kulungile ukwazi ukuba ziphi kunye nendlela ezisetyenziswa ngayo.
Ukuzithoba kukubonisa ukuba isenzo sizithoba okanye asiqinisekanga. Ifom yeemeko yilezo zihlandlo xa isenzo sincike kwenye into. Kusenokwenzeka ukuba uya kufikelela kuphela kwiifomu ezilula kunye ezingaphelele ngokuzithoba kweFrench.
iingubo attirerais attirai i-attirasse
zithatha attirerais mabala iitrasi
iingubo attirerait attira attirât
iimbambo izithwele attirâmes zithintelo
attiriez i -tiretireriez attirâtes attirassiez
umcebisi baleka ku futshane ngetekisi
Kukho na maxesha apho uya kufuna ukusebenzisa umgibeli kumgangatho obalulekileyo . Oku kuya kuba ngamafutshane kunye nezicelo ezixhasayo okanye izicelo. Xa usebenzisa, unokweqa isichazi sesifundo. Ngokomzekelo, esikhundleni sokuba " iingubo ," sebenzisa " iingubo ."
Iziganeko ezingapheliyo I-Il kunye Naso kwi-Itali yokuqala
Indlela yokudibanisa igama lesiJamani elithi Fahren
Umzekelo Isivakalisi seLwimi Faka
Iinkcukacha Okumele Uyazi NgamaYuda
Ubani owayenguSanta Gemma Galgani?
Huntisa iNondyebo yaseMelika ngemali yakho elahlekileyo
I-Providence College ye-GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
Ukubambisa i-Momentum kwiVolleyball
Imibuzo kunye neNjongo yesiNgesi
Uludwe lwegama eliqhelekileyo leJamani leeGrike kunye namantombazana